The hosting industry and webmaster’s march toward faster load times has fuelled the birth of Phalcon –asolution, အရာက်ဘ်ဆိုက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းရန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကချဉ်းကပ်ကမ်းလှမ်း.
အဆိုပါ Phalcon မူဘောင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ, the advantages it can bring to your online projects and how you can make use of it on our web hosting ပလက်ဖောင်း.
မူလကအတွက်ဖြန့်ချိ 2012, Phalcon is open-source PHP ကို ​​web application ကိုမူဘောင် licensed under the terms of the BSD License.
ဒါဟာအသစ်တခုမြန်နှုန်း-အာရုံစူးစိုက် PHP ကိုကို web app ကိုမူဘောင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူတက်လာသော Andre Gutierrez အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်.
မူဘောင်သူ့ဟာသူ၏နာမကိုအဘယ်သူမျှမအံ့သြစရာအဖြစ်သညျ လာ., လင်းတကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးတိရိစ္ဆာန်များအကြားဖြစ်ကြပြီးကတည်းက.
အများဆုံး PHP ကိုမူဘောင်မတူဘဲ, Phalcon web server ကို extension ကိုအဖြစ်ပဋိသန္ဓေယူခဲ့ပါတယ်.
Zephir နှင့် C ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏, ထိုသို့မော်ဒယ်-အမြင်-controller ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးရဲ့ (MVC) ပုံစံ.
Phalcon ရဲ့ပထမဆုံးဖြန့်ချိပြီးကတည်းက, its developers have kept improving the framework by adding new performance-boosting features. One such example is the Volt template engine.
ဤတွင် Phalcon အဆိုပါ go-မှဖြေရှင်းချက်မြန်နှုန်း-အာရုံစူးစိုက်က်ဘ်ဆိုက်စီမံကိန်းများအတွက်ဖြစ်လာသည်ဘယ်ကြောင့်သော့ကိုအကြောင်းပြချက်များမှာ:
သူ့ရဲ့ဆန်းသစ်တဲ့ coding အယူအဆမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, Phalcon တစ်စက္ကန့်လုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့ကပိုသည် HTTP request များအဘို့ခွင့်ပြု (PHP ကိုအဓိကအားဖြင့်စာဖြင့်ရေးသားအလားတူမူဘောင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ), အရာအကြီးအကျယ်ကွပ်မျက်ကြိမ်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ.
Phalcon သင်တစ်ဦးအနည်းဆုံး CPU နဲ့မှတ်ဉာဏ်စားသုံးမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခွင့်ပြု.
အဆိုပါလျှော့ချကွပ်မျက်ခြင်းနှင့်ဝန်အဆသင့်ရဲ့ site ရဲ့အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ပါလိမ့်မယ်, အရာအလိုတော်, တစ်ပြန်တစ်လှည့်, ပိုကောင်းတဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ-မှတဆင့်နှုန်းထားများတိုးမြှင့်.
Phalcon ကျွန်တော်တို့ရဲ့ platform ပေါ်တွင် enabled hosting
ပုံမှန် PHP ကိုမူဘောင်မတူဘဲ, Phalcon အလွယ်တကူ install လုပ်ထားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး.
သင်က၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေခြင်းငှါဆာဗာအမြစ် access ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ Phalcon-sped က်ဘ်ဆိုက်ထဲကအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရဖို့အတှကျနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ Phalcon-ဖော်ရွေပတ်ဝန်းကျင်အကောင်အထည်ဖော်င့်.
DDNS တိမ်တိုက် Hosting & ဒိုမိန်းအမည်များ
View all posts by ချားလ်စ်ဘရောင်း →
Leave Your Comment!	ပြန်စာ ပယ်ဖျက်ပါ
အခမဲ့ 30 Day Trial For All Cloud Web Hosting Plans